Ilemizo | mandimby maharo
Posted on 3 December 2012 3 December 2012 by Mandimby Maharo
Nahazo rariny tany amin’ny Fat ny mpitatitra ao amin’ny UCTU, ka nitana ny sarandakana 400ar. Tsy hoe fitiavana te hiresaka lava momba ity fitanterana eto andrenivohitra ity akory, fa mlahakasika ny fiainana an-davanandron’ny mponina loatra izy ity ka tokony horesahina.
Raha nisy tokoa manko ny fihaonan’ny Fat tamin’ireo mpitatitra ireo hy alatsinainy 26 novambra teo dia tsy nampiova na inona na inona izany ho an’ny mpanjifa. Fampanantenana ny hanovana ireo fiara no hany azon’ny mpanjifa raisina amin’izany:”Noho ny maha renivohitry Madagasikara an’Anttananarivo dia tokony ho matihanina ny fiutanterana iombonana…. Noho izany dia nambaran’ny filoha Rajoelina fa ho avy ny fiara vaovao izay manara-penitraizay bmahazaka olona 25 ka hatramin’ny 40″ hoy ny fanambarana avy ao Ambohitsirohitra. Fiara hovidiana avny Sina ireo ka ho amoraina ny haba-tseranana aloha aminy.
Raha hisy ary fahatongavan’ny fiara atoato, naninona raha notanana aloha ny saran-dalana 300ar mandrapahatonga izany. Rehefa tonga ireo ka itan’ny mpandeha fa tsara dia hanaiky mora ny fampiakarana ny saran-dalana izy ireo. Iaraha mahalala ihany nefa fa raha ny fampanantenana efa natao teto dia tsy ho 1500ar ny vary ary tsy 4800ar ny menaka. ka samy miandry isika. Fa mialoha izany dia indro mba samia manonofy mijery ireto sary ireto.
Ireo fiara ho vidina ho an-Antananarivo
Tags: Antananarivo, TransportCategories: societé